UALITA: IDABI LENGELOSI YESI-2 YAMVA NJE [UHLAZIYO], IITHIYORI, UBUGCISA, ISIQENDU, IITRAILER, SINAZO ZONKE IINKCUKACHA EZINYE ZAKHO - IIMUVI
UAlita: Idabi leNgelosi liqale ngo-2019. Imovie isekwe kumaxesha ka-1990 uthotho lwama-manga aseJapan iGummn. It
UAlita: Ingelosi yokulwa Inkulumbuso isekwe kumaxesha ka-1990 uthotho lwama-manga aseJapan iGummn. Yifilimu yase-cyberpunk yaseMelika ekhokelwa nguRobert Rodriguez kwaye iveliswe nguJames Cameron.
ULaeta Kalogridis ubhale iskripthi. URosa Salazar wayengumkhokeli ophambili njengoAlita. Besinaye uChristoph Waltz, uJennifer Connelly, uMahershala Ali, uEd Skrein, uJackie Earle Haley noKeean Johnson kwindima zokuxhasa.
Umboniso bhanyabhanya uqala xa uAlita evuka enomzimba omtsha kwaye alahlekelwe yimemori.
UAlita: Idabi leNgelosi 2: Zonke iinkcukacha
UJames Cameron's Alita: Idabi leNgelosi eliqale ngonyaka ophelileyo; Nangona kunjalo, ifumene uphononongo oluxubekileyo lwabaphulaphuli. Imuvi ayinayo fanbase ezinikeleyo. Nangona kunjalo, ngandlela thile ixabisa ngaphezulu kweedola ezingama-404.9 yezigidi kwiofisi yebhokisi. Njengoko ifilimu isilele ekwenzeni isiseko somlandeli oqinileyo, akunakulindeleka ukuba kubekho enye into elandelwayo kuyo.
Nangona kunjalo, ukuba iDisney inika umqondiso oluhlaza kuyo ukuze yenzeke, uRosa Salazar utyhile ngoJulayi 2019 ukuba akafumananga naluphi na ulwazi malunga nokulandelelana kuka-Alita. Nangona kunjalo, abenzi bacwangcise imovie yokuqala ngokugcina engqondweni ukuba kuya kubakho enye into ngokuqinisekileyo.
Ngaba iCandelo lesiBini liya kuza?
Nangona kunjalo, ukuba nangaliphi na ithubaukulandelelana kuza, emva koko iyelenqe linokuqikelelwa. Kwinxalenye yokuqala, isixelela ibali lika-Alita, i-cyborg eyafunyanwa kwindawo yokulahla nguGqirha Dyson Ido, owakha ngokutsha umzimba wakhe. Emva koko u-Alita ubuyela ebomini, enye yeengxaki ezinkulu kukuba wayengenayo imemori yokuzimela kwakhe kwangaphambili. Kancinci kwaye ngokuthe ngcembe uqala ukukhumbula izinto zangaphambili. Emva kwexesha ebalini, waphulukana nesithandwa sakhe kwaye waba yintshatsheli yebhola yeemoto.Ngoku uyazi ukuba ungubani, kwaye ibali liza kuqhubeka phambili. Nangona kunjalo, umlawuli uthe kulungile ukuba eyokuqala ayiphumelelanga. Ke sinokulindela ukulandelelana kuka-Alita.
URosa Salazar ngokuqinisekileyo uya kuba nguAlita kulandelelwano ukuba kwenzeke. UChristoph Waltz unokubuyela kunye no-Edward Norton, nangona ingekabikho into yokuba le sequel iyakwenzeka okanye ayenzeki ngenxa yohlolo oluxubeneyo lwenxalenye yokuqala.
Ke kunokubakho okanye kungabikho kubakho okulandelayo. Ke asinakuthetha nto ngayo. Nangona kunjalo, ukuba yenzekile, ngekhe kubekho lutshintsho kubalingisi bayo. Nangona abanye abalinganiswa abatsha bangeniswa kumdlalo bhanyabhanya. Kwaye, ibali liya kuqhubela phambili okanye linokuthatha inxaxheba yokubuyela ngexesha.
boruto dub umhla wokukhutshwa
nini ixesha elizayo lokucinga
Umhla o-2 oqaqambileyo wokukhutshwa
Ngaba ferrell uluhlu lwamafilimu
moriarty i-patriot hulu